touchless ကားရေဆေးပစ္စည်းများ | လက်ကားအော်တိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များ
ပင်မစာမျက်နှာ / ထုတ်ကုန်များ / ကားတစ်စီးရေချိုးထောက်ပံ့ကုန်
သင်ခဏတာကော်ဖီသောက်သည့်အခါကားသန့်ရှင်းရေးလုပ်သောအလုပ်များအဆုံးသတ်သွားသည်။ ကားအပြင်ပန်းသန့်ရှင်းရေးအတွက်ကားပါကင်၊ လမ်းအညစ်အကြေး၊ ရွှံ့၊ shellac စသည်တို့ကိုထိထိရောက်ရောက်ဖယ်ရှားပေးနိုင်သည့် OPS Touchless ကားရေဆေးဆပ်ပြာရည် ကြိမ်။ ဒါပေမယ့်လည်းသင်ကားသန့်ရှင်းရေးဒါရယ်စရာဖြစ်ပါသည်တွေ့လိမ့်မည်!
♣မှီဝဲ-On အင်းဆက်ပိုးမွှား, သစ်ပင်အစေးမျက်ရည်စက်လေးတွေဖယ်ရှားပေးသည်။
♣ Clear ကိုအင်္ကျီကိုဘေးကင်းလုံခြုံမှုပြီးသွား။
♣ Wide လက်သို့မဟုတ်အလိုအလျောက်အဝတ်လျှော်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
touchless ကားရေဆေးကဘာလဲ? ဒါညစ်ပတ်မော်တော်ယာဉ် cleaing များအတွက်ပြီးပြည့်စုံသော ??
ပြင်းအား Ops Touchless မော်တော်ကားရေချိုး Powder ကားရေဆေးစနစ်အတွက်အလိုအလျောက်ကားရေဆေးခြင်း။
မည်သည့်မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစားကိုမဆိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာရော၊ ကား ၀ န်ဆောင်မှုပေးတဲ့နေရာမှာပါသင့်တော်ပါတယ်။
ပစ္စည်း၏အဓိကအားသာချက်မှာ touchless၊ ရှင်းလင်းခြင်းကင်းစင်သည်။ အဘယ်သူမျှမလိုအပ် pre-အဝတ်လျှော်ခြင်းနှင့်ရေမြှုပ်ရှင်းလင်း။ ရေနှင့်အကုန်အကျသက်သာသည်။
Alkalescent materail, PH နှုန်းသည် ၈.၅ ဖြစ်ပြီး၊ SGS, TUV, MSDS, CE Certificate ကိုရရှိခဲ့သည် ဒါကြောင့်ငါတို့ကားရေဆေးပစ္စည်းတွေကိုရွေးချယ်သင့်တယ်။
အမှုန့်, ပိုမိုလွယ်ကူခြင်းနှင့်စျေးသက်သာပေးပို့ကုန်ကျစရိတ်, တအိတ် 500g အတွက်သာရရှိနိုင်♦, 40cars န်းကျင်ကိုလျှော်ပေးနိုင်သည်။
♦ရေထက်ဝက်ကျော်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏။ 30-40 ကားတစ်စီးနှုန်းရေ liters န်းကျင်ရုံ, ရေမှတပါးအများဆုံးကိုသုံးပါ!
♦သာလျှင်ကောင်းစွာဖြစ်ပါတယ်လေပေါ်မှာနှင့်သုတ်ခြင်း။ အဘယ်သူမျှမလိုအပ်လူတစ်ဦးတစ်ဦးတည်းသာကားကိုသန့်ရှင်းရေးအတှကျအ3မိနစ်ကြာ, သုတ်။
အသုံးပြုရလွယ်ကူ, စီးပွားရေး♦နှင့် ထိထိရောက်ရောက်အလွန်အကျွံဖုန်ဖယ်ရှားပေးသည်အခြားအန္တရာယ်ရှိညစ်ညမ်းအတူအသွားအလာအညစျအကွေး။
♦အနိမျ့ ph ကားတစ်စီးလက်ဆေးထုတ်ကုန်အလွန်လွယ်ကူစွာသုတ်ခြင်းနှင့်စွန့်ခွာ တောက်ပနှင့်သန့်ရှင်းသောမျက်နှာပြင်ဧရိယာများ။
♦ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများအသေးစိတ်ကားရေဆေးယာဉ်သစ်ကိုထွန်းလင်းအောင်က ultra ခရမ်းရောင်နေရောင်ရောင်ခြည်များနှင့်အစွန်းရောက်ရာသီဥတုဆန့်ကျင်ကာကွယ်ပေးသည်။
♥မထိ-အခမဲ့စုစည်းကားတစ်စီးရေဆေးအမှုန့် 50kg ရေထဲသို့ပုံးတစ်ပုံး (1-80 dilution အချိုး 120) ရှိခြင်း Ops တစ် packet ကိုဖျက်သိမ်း
♥ပျမ်းမျှအားအဆိုပါယာဉ်မျက်နှာပြင်မှအရည် (ပန်ကာ-shaped) နှင့်လေးဘီးအချက်အချာကိုလေပေါ်မှာပ။ 3o စက္ကန့်ပတ်ပတ်လည်ပြုပြင်ပြီးစီးမည်ဖြစ်သည်။
♥ယာဉ်ဆေး (အနည်းဆုံးရေကိုဖိအား 60MPA စောင့်ရှောက်) ထိပ်ကနေအောက်ခြေထွက်များအားတိုးပွားစေသည်
သင်မြင်သောကြောင့်လက်ကကားရေဆေးထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများမှအဆင်ပြေမယ့်, က booking ကိုဆက်သွယ်ပါ!
♦မော်တော်ယာဉ်ရေဆေးအရည်၏ 2kg ရဖို့ 2.5kg ရေထဲသို့ Ops အော်တိုကားကိုရေဆေးထုတ်ကုန် (အမှုန့်) ၏ packet ကိုဖျက်သိမ်း
(ပိုကောင်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူဆောင်းတွင်းလအတွင်းရေနွေးဖို့ tepid ၏အသုံးပြုမှုကိုအောင်အကြံပြုရန်) ။
အဆိုပါဖျက်သိမ်းမော်တော်ယာဉ်ရေဆေးအရည်ကို အသုံးပြု. 4% ၏အချိုးအစားဆီသို့အချိုးကျစုပ်စက်ကိုသတ်မှတ်ပေးသောပြီးနောက်♦။
♦ယာဉ်မှုတ်ဆေးဘူးအဆိုပါယာဉ်ရေချိုးသို့ယာဉ် drives တွေကိုတစ်ချိန်ကအညီအမျှအရည်ဆေးကြောပါ။
♦ 60kg အထက်မှယာဉ်အဝတ်လျှော်စက်ရဲ့ဖိအား Adjust ။
flushing ပြီးနောက်♦, ချက်ချင်းကြီးမားတဲ့သုတ်ပဝါရှိခြင်းယာဉ်ခြောက်။
မှတ်ချက်ချ: အဆိုပါအမှန်တကယ် dilution အချိုး 1 ဖြစ်ပါသည်: 125
အဖြစ်ဒဏ်ငွေသန့်ရှင်းရေးဆိုင် (အလိုအလျောက်ကားတစ်စီးရေဆေးအဖြစ်အတူတူလုပ်ထုံးလုပ်နည်း) အတွက်ရရှိနိုင်ပါကားကိုရေဆေးအမှုန့်
Touchless မော်တော်ကားရေချိုး Powder
ကုန်ပစ္စည်းအထူးအသေးစိတ်။ 500g / 1 Bag
စျေးနှုန်း အမေရိကန် $ 2.00-2.50 500g / Bag (FOB Ningbo / ရှန်ဟိုင်း)
အာမခံချက်ကာလ 3-5 နှစ်များ
MOQ 1 MT (2000 အိတ်)
ကုန်ပို့ရက်စွဲ 15 ရက်ပေါင်းဝန်းကျင်။